Stinger ကိုမိတ်ဆက်ဖို့ Event တစ်ခုဖန်တီးလိုက်တဲ့ KIA! – AutoMyanmar
Stinger ကိုမိတ်ဆက်ဖို့ Event တစ်ခုဖန်တီးလိုက်တဲ့ KIA!
KIA Myanmar ဟာတော့ သူ့ရဲ့ Stinger အသစ်စက်စက်ကြီးကို မိတ်ဆက်ပေးဖို့ “KIA Stinger Pre-Launch” event တစ်ခုဖန်တီးလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆက်သွားမယ့် Stinger အသစ်ကြီးဟာ 2018 Car of the Year ဆုကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ Sport Sedan ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Stinger Pre-Launch event ကို လာမယ့် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ (စနေနေ့) ညနေ ၆ နာရီခွဲမှာစတင်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး ကျင်းပမယ့်နေရာကတော့ ရန်ကုန်က KIA Car Showroom မှာပါ။
Event မှာ Stinger ကားအသစ်ကလေးကိုသာ မိတ်ဆက်သွားမှာ မဟုတ်ပဲ အခြား KIA ကားမော်ဒယ်တွေကိုလည်းအထူးလျော့စျေးတွေနဲ့ရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ ကားတွေကိုလေ့လာရင်း ဗိုက်ဆာရင်ဝင်ဆွဲလို့ရအောင် အစားအသောက်တွေပြင်ဆင်ထားသလို၊ စိတ်ပျော်ရွှင်မှုရရှိအောင် ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေပါထည့်သွင်းပေးထားပါသေးတယ်။
Pre-Launch event မှာရင်အခုန်ရဆုံးဖြစ်မှာကတော့ Lucky Draw အစီအစဉ်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Lucky Draw အစီအစဉ်မှာ တန်ဖိုးကြီးလက်ဆောင်တွေအပြင်.. ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲစဉ်ကို ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှု့နိုင်အောင် “ရုရှားနိုင်ငံ ၃ ညအိပ် ၄ ရက် ခရီးစဉ်” (၂) ယောက်စာပါဝင်လို့ပါပဲ။ (KIA မှကားနှစ်စီး (သို့) နှစ်စီးအထက် ဝယ်ယူထားတဲ့ မိတ်ဆွေများသာ event ရဲ့ Lucky Draw အစီစဉ်ကိုကံစမ်းနိုင်မှာပါ)။
ဒီဇိုင်းအလန်းစားကားမော်ဒယ်တွေကို လေ့လာနိုင်တဲ့အပြင် ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲစဉ်ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်မယ့် Lucky Draw အစီအစဉ်ကလည်းစောင့်ကြိုနေတာမို့ ကားချစ်သူတွေသွားရောက်လည်ပတ်သင့်တဲ့ Event တစ်ခုလို့ပဲ အကြုံပြုချင်ပါတယ်။
Kia, local, Motor Show and Event